मांसाहारी आन्दोलनको तुजुक | Ekhabar Nepal
राजनीति माघ २२ 2077 ekhabarnepal
लामो समयको लकडाउनका कारण एक वर्षदेखि थला परेको अर्थतन्त्र भर्खरै चलायमान् हुन थालेको अवस्थामा जिम्मेवार दलका नेताहरुले वहादुरी प्रदर्शन गर्नका लागि आम हडतालको घोषणा गरेर सडकमा उत्रेका छन् ।
विद्यार्थीहरु विद्यालय जान नपाएर तड्पीरहेका थिए जो भर्खरै तङ्ग्रदै थिए । पठन पाठनले लय समाउँदै थियो । अर्थतन्त्र गतिशील हुँदै थियो । दौडादौड थियो सवैका लागि यो समय । साँच्चिनै मिनेट मिनेटको महत्व छ अहिलेको समय । एक वर्षको आराम पश्चात् काममा फर्कदै गर्दा यस प्रकारका घटना हुनु आफैमा दुःखद र अस्वभाविक छ । मृत्युको मुखमा पुगेर फर्केको ब्यक्तिले जस्तो अनुभुति गर्छ ठिक त्यस्तै अनुभूति हुँदै थियो यतिवेला । यस्तो जटिल मोडमा जनतालाई आहात दिएर नेताहरु जिम्मेवार वनेको नाटक गर्दै छन् ।
निश्चयनै कुनै वेला यस प्रकारका आम हडताल वहादुरीका संकेत हुने गर्दथे । अमुक पार्टीले नेपाल वन्द गर्यो भनेपछि सो पार्टीको शान र मान अर्कै हुन्थ्यो । ती आयोजकहरु आफूलाई ठालु सम्झेर जुलुसको नेतृत्व गर्दथे वा कहीं कतै लुकेर गाडी तोडफोड गर्थे ।
समय क्रममा हडतालप्रति मानिसको अरुचि वढ्यो । समाज मात्र हैन पार्टीहरु पनि तदनुसारको साँचा र ढाँचामा मौलाउँदै गए । अझै अहिलेको अवस्थामा कोरोना महामारीले एक पछि अर्को संकट निम्त्याएको छ । बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर ब्यावसायीहरु छटपटाएका छन् । नयाँ ब्यक्तिहरु विभिन्न उद्यमशिलतामा जोडिएका छन् । जोडिन खोजिरहेका छन् । अर्थात् आम मानिसमा एक प्रकारको छटपटी, खटपटी र वेचैन भइरहेको छ ।
लोकतन्त्रमा विरोधसभा वा असहमति जनाउने अनेकन उपाय हुन्छन् र छन् । तर पनि आज नेपाल वन्दजस्ता घटिया कार्यक्रम राखेर गैर जिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गरिएको छ । कसैलाई लागेको होला यसवाट वहादुरीको प्रदर्शन हुन्छ । भ्रम नरहोस् वहादुरी हैन यो त कायरहरुको विकल्प हो ।
आम हडताल गर्न यस मानेमा सहज छ कि घोषणा गरेपछि एक आध ठाउँमा तोडफोड मात्र गरे पनि यो सफल हुन्छ । यसको तुलनामा मानिस जम्मा गर्ने र आमसभा गर्नु भनेको कता हो कता कठिन र दुःख हुन्छ ।
शायद यही सोंचेर यस प्रकारको कार्यक्रम राखिए होला । उनीहरुलाई लागेको होला यसवाट जनमत प्रकट हुन्छ । जनमत प्रकट डर, धम्कीवाट हुँदैन । बरु यसका लागि उपयुक्त विधि भनेको जनताले मतदानको माध्यमवाट अभिमत प्रकट गर्नु हो । विडम्वना के छ भने यो वन्दका आयोजकमा तीन तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ ।
वन्द आयोजकले ठूलै काम गरेको देखाउन सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका स्टाटसमा आएका प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने जन आक्रोशको मापन थाहा हुन्छ ।
जस्तै एकजना पूर्व सचिव युवराज पाण्डेले लेख्नुभएको छ—
आफू सरकारमा हुँदा कहिल्यै कसैले चक्काजाम र नेपाल वन्द गर्नुहुँदैन, नगरौं भनेर कराउँदै हिड्ने र अव हामीहरुले त्यसो गर्दैनौं भन्ने प्रतिवद्वता समेत प्रकट गर्ने नेताहरुले अहिले तीन तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेत भएर आफैले नेपाल वन्द र चक्काजामको घोषणा गरेछन् । संभवतः नेताहरुले आफुले जे गरे पनि हुन्छ, जनताहरुसंग गरेका प्रतिवद्वताहरु आफुहरुले पालना गर्नुपर्दैन भन्ने सोंच्छन् । कहिं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने कहावत् यस्तै प्रवृत्तिको निम्ति भनिएको होला ।
एकपटक विथतलाई स्मरण गर्नैपर्छ नेताहरुले । यति विधि असर गर्ने कार्यक्रम राख्ने । अनि वाध्यता भनेर उम्कने ?
यसलाई कसैले आत्मघाती गोल भनेर भनेका छन् । पर्यटनविद् कर्ण शाक्यले ओलीले भोलि मान्छे जम्मा गर्ला भनेर डराएको हो कि ? भनेर प्रश्न उठाएका छन् । सम्भवतः यसमा सत्यता छ कि ? नेकपा ओली समुहले भोलिनै काठमाण्डौमा ब्यापक जन प्रदर्शन गर्न गइरहेका छ । जसका लागि देशका विभिन्न ठाउँवाट जाने क्रम चलेको छ । के आज वन्द गरेर तिनहिरलाई रोक्न खेजिएको हो ? यदि हो भने हेक्का रहनुपर्छ यसो गर्दा कार्यक्रम अझ ज्यादा वृहत् र ब्यापक हुनेछ ।
सामाजिक सञ्जालमै विभिन्न ब्यक्तिले लेखेका प्रतिक्रिया प्रतिनिधिमूलक ढंगले हेर्दा यस्तो भेटाउन सकिन्छ ।
 हाम्रो राजनीति संस्कारविहीन भयो । लोकतन्त्र, विधि—विधानको अर्थहिन ब्याख्या यिनीहरुवाटै सुन्नुपर्दा लज्जावोध हुन्छ । हिनतावोधले शीर निहुराउँछ । शायद हाम्रा पूर्वजले यस्तैलाई सतिको श्राप भनेका हुन् कि ?
 यी नेता हुने लायकका भए देशको यो हविगत हुन्थ्यो र ? यी त विदेशीकाृ खुट्टा मोल्ने... हुन । नेपाली स्वाभिमानका कलंक ।
 आतंककारी शैलीमा जनताप्रति आका्रमक रुपमा गरिएको हमला क्रान्तिकारीको उपनाम दिइरहेका छन् । हेर लठेग्राहरुले क्रान्तिकारी शब्दको दुरुपयोग गरेको ।
 एक्काइसौ सताब्दीमा वन्दलाई बिरोधको औजार ठान्नेहरुले एक्काइसौ सताब्दीको नेता वन्ने औकात र नैतिक अधिकारराख्दैनन् । चाहे ति झोलेहरु कांग्रेस हुन् वा कम्युनिष्ट हुन् । पढेलेखेकाहरु सोच वदलौ । नारा जुलुस नेपाल वन्द गरेर देश वन्दैन । कसैलाई सत्तामा पुर्याउन गरिने यी कार्य निन्दनीय छन् ।
 कम्युनिष्टको खोलआढेर अस्थिरता ल्याउन खोज्नेलाई अब सुरक्षाकर्मी मात्र हैन जनतालेनै भित्तामा पुर्याउनुपर्छ ।
यसले के संकेत गर्छ ? वन्द गरेर जनता भड्काउन सकिन्छ जोड्न सकिदैन । केही दिन अघि प्रचण्डले मांसाहारी आन्दोलन गर्ने भनेर खुलम खुल्ला भाषण गरेकै थिए । शायद मांसाहारी आन्दोलनको तुजुक यस्तै हुन्छ होला ?